Factory scale kamiao - Mpanamboatra ambaratonga kamiao China, mpamatsy
Scale tsy misy rano
Rindramba vita amin'ny volo mihintsana
Fitaovana mizana amin'ny fiara
Fihenjanana sy famoretana
Taratasy fandefasana teboka tokana
Mizana amin'ny kamio
Mizana mavesatra amin'ny gorodona indostrialy
Serivisy aorian'ny fivarotana sy Raharaha
Ny ambaratongan'ny Ben Waterproof Bench
Sehatra latabatra tsy misy rano an'ny JJ
Beam vita fehezam-bidy roa-DESB9
Beam vita fehezam-bidy roa-DESB8
MAFANA NY lanjan'ny lanjan'ny CONCRETE
TENY LOHATEN'NY PIT TYPE
Ny karazana karazana hazakazaka karazana pit dia mety indrindra amin'ny toerana misy toerana voafetra toy ny faritra tsy misy havoana izay tsy dia lafo ny fananganana lavaka. Satria mitovy amin'ny tany ny lampihazo, ny fiara dia afaka manatona ny faravodilanitra amin'ny lafiny rehetra. Ny ankamaroan'ny mpamaky lanjan'ny besinimaro dia maniry an'ity famolavolana ity.
Ny endri-javatra lehibe dia ny sehatra mifamatotra mivantana, tsy misy boaty fifandraisana, ity dia kinova nohavaozina miorina amin'ny kinova taloha.
Ny endrika vaovao dia mahomby kokoa amin'ny fandanjana kamiao mavesatra. Raha vantany vao natomboka io famolavolana io, dia nanjary nalaza teo amin'ny tsena sasany, namboarina tamin'ny fampiasana mavesatra, matetika, isan'andro isan'andro. Fifamoivoizana sy fandanjana be loatra eny an-dalana.
FITSABOANA FITSABOAN-DALANA LEHIBE VOALOHANY NA VOAFITRA
* Ny lovia tsotra na ny takelaka misy takelaka dia tsy voatery
* Voaforon'ny taratra 4 na 6 U sy ny vantson'ny C, matanjaka sy henjana
* Tapahina ny afovoany, misy ifandraisany amin'ny baomba
* Kambana mitondra sela na lozam-pifamoivoizana
* Misy ny sakany: 3m, 3.2m, 3.4m
* Halavany mahazatra: 6m ~ 24m
* Max. Fahafahana misy: 30t ~ 200t
Ambaratonga kamio palety
Ny sensor avo lenta dia hampiseho fandanjana marina kokoa
Milanja 4.85kgs eo ho eo ny masinina iray manontolo, mora entina sy maivana tokoa. Taloha, ny fomba taloha dia mihoatra ny 8 kg, izay sarotra entina.
Famoronana maivana, ny hatevin'ny 75mm amin'ny ankapobeny.
Fitaovana fiarovana namboarina, hisorohana ny faneren'ny sensor. Ny fiantohana f herintaona.
Fitaovana firaka aliminioma, matanjaka sy mateza, mandoko sanding, tsara tarehy sy malala-tanana
Mizana vy tsy misy fangarony, mora diovina, porofo tsy harafesina.
Charger mahazatra an'ny Android. Miaraka amin'ny sarany indray mandeha, dia mety maharitra 180 ora.
Tsindrio mivantana ny bokotra "fiovam-po", afaka manova KG, G, ary
Mizana amin'ny palleet - Indikator-pipoahana porofo mipoaka
Ny maridrefy kamiao karazana palleet ihany koa dia nantsoina hoe mizana môtô finday izay manamora ny lanjany.
Ny mizana mizana pallet dia mety milanja entana mandritra ny fivezivezena fa tsy mamindra ny entana amin'ny refy. Afaka mamonjy ny fotoana iasanao, manatsara ny fahaizanao miasa. Safidy famantarana isan-karazany, azonao atao ny misafidy tondro sy haben'ny pallet isan-karazany arakaraka ny fahitanao azy. Ireo mizana ireo dia manome valiny mavesatra na fanisana azo antoka na aiza na aiza no ampiasana azy.
Mizana mivaingana vita amin'ny beton ho an'ny fandanjana ireo fiara tsy mataho-dalana.
Izy io dia famolavolana mitambatra izay mampiasa deck beton miaraka amina rafitra vy modular. Ireo lapoaly vita amin'ny beton dia avy amin'ny orinasa vonona handray beton tsy misy fantsom-panafody na fametrahana toerana ilaina.
lapoaly dia avy amin'ny orinasa vonona handray beton tsy misy fantsom-panafody na fametrahana toerana ilaina.
Manamora ny fametrahana azy io ary miantoka ny kalitaon'ny deck amin'ny ankapobeny.
FISAORANA FANDAMINANA NY LALANA / TOROTRA SY SISTEM NY FANDAMINANA
Mametraha teboka fikarohana tsy mijanona oveload, ary angony ny fampahalalana momba ny fiara ary mitaterà amin'ny foibe fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny rafitra fandanjana haingana.
Afaka nahafantatra ny laharan'ny takelaka fiambenana sy ny rafitra fanangonana porofo eny an-toerana izy ireo mba hampandrenesana ny fiara be loatra amin'ny alàlan'ny rafitra fitantanana feno ny fifehezana siantifika ny overlad.
Ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana milanja ambany lanja amin'ny fitaterana, fananganana, angovo, fiarovana ny tontolo iainana ary indostria hafa; fametrahana varotra eo anelanelan'ny ozinina, toeram-pitrandrahana ary orinasa, ary ny famantaran'ny entona fitaterana ny famaky ny fiara. Milanja haingana sy marina, fandidiana mety, fametrahana tsotra sy fikojakojana. Amin'ny alàlan'ny fandanjana ny lanjan'ny vondrona axle na axle amin'ny fiara, ny lanjan'ny fiara manontolo dia azo amin'ny alàlan'ny fanangonana. Manana tombony amin'ny habaka gorodona kely izy, tsy dia manorina fanorenana, famindran-toerana mora foana, fampiasana roa tonta ary miovaova sns.
Lanja milanja kely
Miaraka amina vy vy, manafoana ny asan'ny sivily ary ny asa vita amin'ny beton dia asa ihany koa, izay mila asa fototra ihany. Sehatra mafy sy malama tsara ihany no ilaina. Ity dingana ity dia miangona amin'ny fitehirizana ny vidin'ny asa sy fotodrafitrasa sivily.
Miaraka amin'ny tavy vy, ny boriborintany dia azo ravana ary averina mivory ao anatin'ny fotoana fohy, azo afindra eo akaikin'ny faritra misy azy io. Izany dia hanampy be amin'ny fampihenana ny halaviran'ny firaka, ny fihenan'ny vidin'ny fikirakirana, ny herin'olombelona ary ny fanatsarana ny famokarana.
Ny lanjan'ny lalamby elektrika dia fitaovana fandanjana ho an'ny lamasinina mandeha amin'ny lalamby. Ny vokatra dia manana firafitra tsotra sy vaovao, endrika tsara tarehy, avo lenta, fandrefesana marina, famakiana intuitive, hafainganam-pandrefesana haingana, fahombiazana azo antoka sy azo antoka, sns.
Adidy mavesatra niomerika gorodona indostrialy indostrialy ambany kalitaon'ny vy karbonika vy Q235B
Ny ambaratonga PFA221 gorodona dia vahaolana milanja feno izay manambatra sehatra sy terminal lehibe. Mety amin'ny fametahana dock sy fotodrafitrasa fanamboarana ankapobeny, ny sehatra mizana PFA221 dia manasongadina tampon-takelaka diamondra tsy misy fotony izay manome tohatra azo antoka. Ny terminal nomerika dia mitantana isan-karazany ny fandanjana mandanjalanja, ao anatin'izany ny fandanjana tsotra, ny fanisana ary ny fanangonana. Ity fonosana voatanisa tanteraka ity dia manome lanja marina sy azo itokisana nefa tsy misy sarany lafin-javatra fanampiny izay tsy ilaina amin'ny fampiharana lanjany mavesatra.
5 Ton Digital Platform Floor Scale With Ramp / Portable Industrial Floor Scales
Ny mizana Smartweigh dia mampifangaro ny fahamarinana miavaka amin'ny faharetana hijoro amin'ny tontolo indostrialy henjana. Ireo mizana mavesatra ireo dia vita amin'ny vy vy na vy vy vita amin'ny loko ary natao hihaona amin'ny filàna milanja indostrialy isan-karazany, ao anatin'izany ny fametahana, famenoana, fandanjana ary fanisana. Ny vokatra mahazatra dia nolokoana vy malefaka na vy tsy misy fangarony amin'ny 0.9 × 0.9M ka hatramin'ny 2.0 × 2.0M habe ary 500Kg hatramin'ny10,000-Kg capacities. Ny famolavolana rocker-pin dia miantoka ny famerenana.
Mizana mizana indostrialy 3 Ton, mizana avo lenta an'ny trano fanatobiana 65mm
Ny haben'ny gorodona PFA227 dia manambatra ny fanamboarana matanjaka, ny toerana madio madio. Izy io dia maharitra mateza mba hanomezana lanjany marina, azo itokisana ary mijoro hatrany amin'ny fampiasana tsy tapaka amin'ny tontolo mando sy manimba. Vita amin'ny vy tsy misy fangarony tanteraka izy io, mety amin'ny fampiharana ara-pahasalamana izay mila fanasana matetika. Misafidiana amin'ireo karazana famaranana isan-karazany izay manohitra ny fikororohana ary mora diovina tanteraka. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fotoana sy ny ezaka ilaina amin'ny fanadiovana dia manampy anao hampitombo ny vokatra ny refin'ny gorodona PFA227.
Zava-misy efa hatry ny ela fa hisy ny mena
ny vakiana pejy iray rehefa mijery
Adiresy:Lalana No.1 jinhua, distrikan'i zhifu
Calibration Mass, Calibration lanjan'ny napetraka, Lanja voamarina, Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Shear Beam Load Cell, Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika,